မြန်မာကျပ်ငွေ မာတာလား၊ စီးပွားရေးမကောင်းလို့လား ….. - BETV Business News
+95 9444212179 [email protected]
နေ့စဉ်သတင်း5မေလ 2021
ယူကေသို့ ဒုတိယအကြိမ် ထောပတ်သီးတင်ပို့ရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း ယခုအချိန်ထိ မတင်ပို့ဖြစ်သေး
မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းအတွက် အဆိုပြုရှယ်ယာဝယ်ယူခြင်းရက်ကို ရိုးမအုပ်စု၊ တရုတ်မှ Ant Financial ဖက်စပ်တို့က တိုးမြှင့်တော့မည်မဟုတ်
ဧပြီလအတွင်း ထုတ်ကုန်နှင့် အော်ဒါသစ်ရရှိမှုက (၅)ဆအမြန်နှုန်းဖြင့် ကျဆင်းခဲ့ဟု မြန်မာထုတ်လုပ်မှု PMI အညွှန်းကိန်းက ဖော်ပြ
နေ့စဉ်သတင်း4မေလ 2021
ဟောင်ကောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ မြန်မာပြည်ကို စွန့်ခွာပြီး ကမ္ဘောဒီးယားမှာ အခြေချဖို့ မျက်စိကျနေ
အိန္ဒိယသို့ ခရီးသွားခဲ့သူများကို မြန်မာက ပြည်ဝင်ခွင့် ခေတ္တပိတ်၊ မေ (၃၁) အထိ ဝင်ရောက်ခွင့် ကန့်သတ်ထား
ယနေ့ တရုတ်နယ်စပ် ကျယ်ဂေါင်ကို LockDown ဖြည်မည်၊ အဓိကနယ်စပ်ဝင်/ထွက်ပေါက် မန့်ဝိန်းဂိတ်ဖွင့်နိုင်ရန် မျှော်မှန်း
Career at BETV
မြန်မာကျပ်ငွေ မာတာလား၊ စီးပွားရေးမကောင်းလို့လား …..
ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၁
လက်ရှိ မြန်မာကျပ်နဲ့ ဒေါ်လာလဲလှယ်မှုနှုန်းဟာ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ခွဲကာလက ငွေကြေးလဲလှယ်တဲ့နှုန်းထားကို ပြန်ရောက်လာခဲ့ တယ်။ သုံးနှစ်ဆက်တိုက် အတက်ပြနေခဲ့တဲ့ငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်းဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း တရိပ်ရိပ်ကျဆင်းလာနေတာပါ။ ထူးခြားချက်အနေနဲ့ အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံငွေကြေးတွေ ဖောင်းပွလာတဲ့အခြေအနေမှာ မြန်မာကျပ်ငွေက ခပ်မာမာ ဖြစ်လာနေတာပါ။
မြန်မာကျပ်ငွေမာလာရခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတွင်းမှာ ဝိဝါဒကွဲပြားနေဆဲပါ။ ဘာကြောင့်ဆိုရင် ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ကလည်း တောက်လျှောက် အမေရိကန်ဒေါ်လာကို ဝယ်ယူပေးနေသလို လက်ရှိကုန်သွယ်ရေးအခြေအနေကလည်း COVID-19 အခြေအနေကြောင့် သိပ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးလို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။
ပြင်ပငွေကြေးဈေးကွက်အကျိုးဆောင်တွေကတော့ ပြည်တွင်းငွေကြေးဈေးကွက်ဟာ တရုတ်ငွေကြေးကို တည်မှီနေတာဖြစ်ပြီး တရုတ်စီးပွားရေးအခန်းကဏ္ဍက မြန်မာငွေကြေးလဲလှယ်မှု အနေအထားပေါ် ရိုက်ခတ်မှုရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ငွေကြေးဈေးကွက် ရဲ့ အပြောင်းအလဲက တရုတ်ငွေကြေးအပေါ်မှီခိုနေရတာ ဆိုပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်အတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ တရုတ်ယွမ် လဲလှယ်ရာမှာ တရုတ်ယွမ်က ပိုပျော့ခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာ ရှိနေပါတယ်။
သို့ပေမယ့်လည်း ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးက ၂၀၁၉ တစ်နှစ်လုံး အမြင့်ဆုံးစံချိန်တွေနဲ့ ရပ်တည်နေခဲ့တာ ဖြစ်တာတွေ့ရှိရပါတယ်။ တစ်ဖက်က အမေရိကန်ငွေကြေးကတော့ ပျော့တဲ့အနေအထားမှာ ရှိနေခဲ့တဲ့အတွက် ဒီအကျိုးဆက်က မြန်မာကျပ်ငွေကို ပြန်မာနေစေတဲ့ အခြေ အနေမျိုး ဖြစ်နေတာလား တွေးယူစရာပါ။
မြန်မာကျပ်ငွေကတော့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလလောက်ကနေ စတင်ပြီး တဖြေးဖြေး မာလာခဲ့တာပါ။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ COVID-19 ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်း မြန်မာကျပ်ငွေက လျှင်လျှင်မြန်မြန်ကို ကျဆင်းလာခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း မြန်မာ့ စီးပွားရေးက ထင်သလောက် မကောင်းမွန်ဘူးလို့ လုပ်ငန်းရှင်အများစုက ယူဆထားကြပါတယ်။
စီးပွားရေးမကောင်းတဲ့အတွက် ငွေကြေးသုံးစွဲတာ လျော့ကြတဲ့သဘောမျိုးလည်း တွေ့ရပြီး ကုန်သွယ်ရေးအရမှာ အရင်လို ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်လုပ်တာ သိပ်မရှိတော့ဘူးလို့ ဆိုကြပါတယ်။
“အရင်က ပစ္စည်းကို ကွန်တိန်နာ လေးငါးလုံး ဝယ်သူတွေက အခုတော့တလုံးလောက်ပဲ ဝယ်ကြတော့တာ တွေ့ရတယ်” လို့ ပြင်ပငွေကြေး အကျိုးဆောင်က ပြောပါတယ်။
ဒီလိုမဝယ်ကြတော့တဲ့အတွက် ပြည်တွင်းမှာ ဒေါ်လာအသုံးနည်းပြီး ပို့ကုန်ရငွေတွေက ပြင်ပကို ပြန်မစီးထွက်တာကြောင့်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ပစ္စည်းမျိုးတွေ သွင်းကုန်လျော့ကျလာတွေ ရှိတယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ တစ်နှစ်လုံးရဲ့ ငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်းထားဟာ ပျမ်းမျှတစ်ဒေါ်လာကို ကျပ် (၁၅၀၀) ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေပြီး အထည်ချုပ်၊ ဆန် စပါးတွေအပြင် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေ အားကောင်းခဲ့တာရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအညွန်းမန်နေဂျာ (PMI)9 အညွန်းကိန်းကဏန်းကလည်း ပျမ်းမျှ (၅၀) အထက်မှာရှိနေပြီး ပို့ကုန်ဝင် ငွေကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကို သက်သေပြနေပါတယ်။ ပို့ကုန်ဝင်ငွေကောင်းခဲ့ပေမယ့် သွင်းကုန်အနေအထားမှာတော့ သိပ်မကောင်း တဲ့အခြေအနေမှာ ရှိနေတယ်လို့ ဆိုကြတာမို့ ပြည်တွင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာပျော့လာရခြင်းလားလို့ ရည်ညွန်းရမယ့် သဘောဖြစ်နေတယ်။
ကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခြေအနေ
၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၇) ဘီလီယံကျော် ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး သွင်းကုန်အနေနဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၈) ဘီလီယံကျော် ကုန်သွယ်ထားနိုင်ခဲ့ကာ စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးက (၃၅) ဘီလီယံကျော် ရှိပါတယ်။၂၀၁၉-၂၀ မှာတော့ ပို့ကုန်အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇ ဒသမ ၆၅) ဘီလီယံကျော်ရှိပြီး သွင်းကုန်အနေနဲ့ (၈ ဒသမ ၆၆) ဘီလီယံကျော် ရရှိထားပြီး ကုန်သွယ် မှုကွာခြားချက်က (၁) ဘီလီယံကျော်ရရှိထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီအချက်တွေအရ ကုန်သွယ်မှုမှာ သွင်းကုန်ကဏ္ဍက ပို့ကုန်ကဏ္ဍက (၁) ဘီလီယံကျော် ပိုများနေတဲ့အနေအထားမှာ ရှိနေသလို ကာလတူ နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုလည်း (၁) ဘီလီယံကျော် ပိုတိုးတက်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်းမှာ အားကောင်းတဲ့အခြေအနေက CMP စနစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း ပို့ကုန်တွေ အားကောင်းတာတွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ အခြေအနေအရလည်း ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄ ဒသမ ၁) ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကြပြီး ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် လက်ရှိအချိန်ထိ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂ ဒသမ ၅) ဘီလီယံလောက် ဝင်ရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ပြောရရင် လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အရှိန်ပိုကောင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံခြားငွေကြေးစီးဆင်းမှု ပိုအားကောင်းလာတယ်လို့ ယူဆရမယ့် အချက်တွေဖြစ်ပြီး Myanmar Manufacturing Index (PMI) အညွန်းကိန်းဟာလည်း တစ်နှစ်တာအတွင်း ပျမ်းမျှ (၅၂) ရတဲ့အနေအထားအရ ပို့ကုန် ပိုအားကောင်းလာတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
ရိုတ်ခတ်မှုတွေ ရှိလာတဲ့ ပို့ကုန်ကဏ္ဍ
ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ တစ်ဒေါ်လာကို ကျပ် (၁၃၀၀) ဝန်းကျင်ကို ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက် အခက်အခဲရှိတဲ့အနေအထားကို တွေ့ရပါတယ်။
အဓိကကတော့ ငွေကြေးတည်ငြိမ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ ပို့ကုန်ကို ရဲရဲကြီး ပို့နိုင်မှာဖြစ်သလို သွင်းကုန်ကိုလည်း ရဲရဲကြီးသွင်းနိုင်မှာ ပါ။ အခုတော့ပို့လည်း မပို့ရဲ့ဝယ်လည်း မဝယ်ရဲတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်လို့ ပဲနှမ်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အတွင်းရေးမှူး ဦးမင်းကိုဦးက ပြောပါတယ်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် သုံးလတာအတွင်း ပြည်တွင်းငွေလဲလှယ်နှုန်းဟာ ကျပ် (၁၀၀)ဝန်းကျင် ကျဆင်းသွားတဲ့အနေအထားကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေ ရင်ဆိုင်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုတ်တရက် ဈေးကျဆင်းနေတာကြောင့် ပြည်တွင်းဆန်တင်ပို့သူတွေအနေနဲ့အရူံးပေါ်တဲ့အတွက်ဆန် ဝယ်ယူတာတွေကို ရပ်နားတာရှိလာနေပါတယ်။ နယ်စပ်ဆန်တင်ပို့မှု မကောင်းတာကြောင့် ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်ရေးကို အဓိကအားထားနေရတဲ့ဆန်ဈေးကွက်ဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ဈေးကွက်အသစ်တွေ ရှာဖွေနိုင်သလို တရုတ်ကိုတင်ပို့မှုကလည်း အားကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်းက စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့စဉ်တုန်းက ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းဟာ တစ်ဒေါ်လာကို ကျပ် (၁၄၈၀) ဝန်းကျင် ရှိနေရာကနေ လက်ရှိမှာတော့ ကျပ် (၁၃၀၀) ဝန်းကျင်သာရှိတော့တဲ့အတွက် ကျပ် (၁၈၀) လောက် ဆုံးရှံး နစ်နာသွားခဲ့တယ်လို့ ဘုရင့်နောင်ဆန်ကုန်စည်ဒိုင် အတွင်းရေးမှူး ဦးသန်းဦးက ပြောပါတယ်။
ဒေါ်လာဈေးကျဆင်းလာမှုက ပို့ကုန်ကဏ္ဍအပေါ်မှာတော့ အတော်ရိုက်ခတ်မှုရှိလာနေတာပါ။ အထည်ချုပ်လိုကဏ္ဍမှာတော့ COVID-19 ကြောင့် ကုန်ကြမ်းပြတ်တောက်မယ့်အခြေအနေမျိုးကို ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ နောက်ထပ်အပူကတော့ ငွေဈေးနှုန်းကျဆင်း လာတဲ့ ရလာဒ်ကိုပါ ခံစားနေရတာပါ။
ပို့ကုန်တွေအပေါ် ရိုက်ခတ်မှု ရှိပေမယ့် သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ကလည်း သိပ်မထူးခြားတဲ့သဘောကိုဆောင်နေတယ်လို့ ပြင်ပ ငွေကြေးအကျိုးဆောင်နေတွက ပြောပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် တစ်နှစ်လုံး သွင်းကုန်တွေသွင်းတာ လျော့ကျလာတာမို့ ဒေါ်လာအဝယ် နည်းတယ်လို့ ပြောဆိုလာခဲ့ကြတာပါ။ ပုံမှန်ဝယ်ယူမှု အားကောင်းတဲ့သွင်းကုန်တွေတောင် လျော့ပြီး သွင်းလာကြတဲ့အတွက် ပြင်ပ ဈေးကွက်မှာလည်း အရောင်းအဝယ်အေးခဲ့တာ အတော်ကြာပြီလို့ ဆိုကြပါတယ်။
ငွေကြေးလဲလှယ်မှုကျဆင်းလာတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်အနေနဲ့ကလည်း စီးပွားရေးကဏ္ဍအပေါ်ရိုက်ခတ် မှုရှိလာတဲ့ အတွက် ဗဟိုဘဏ်နဲ့ နိုင်ငံတော်အစီုးရကို တင်ပြသွားမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
COVID-19 ကြောင့် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာလည်း အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနေပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဗဟိုဘဏ် အနေနဲ့ ကလည်း အတိုးနှုန်းကို (၁ ဒသမ ၂၅) ကို လျော့ချလိုက်တာတွေ့ရပြီး ကမ္ဘာရေနံဈေးကွက်မှာလည်း ဈေးနှုန်းလျော့ချကြတဲ့ ဖြစ်ရပ် တွေ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း တွေ့ရှိရတာပါ။
သို့ပေမယ့် ပြည်တွင်းငွေဈေးကွက်မှာ ကျပ်ငွေတန်ဖိုးမာနေပေမယ့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ထိုင်းလို နိုင်ငံတွေမှာတော့ သူတို့ ငွေဈေး နှုန်းတွေက ကျဆင်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် မြန်မာအနေနဲ့ကတော့ ဆက်အားကောင်းနေတဲ့သဘောကို တွေ့ရပါတယ်။
ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလကနေ မတ်လ (၁၀) ရက်အထိ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း (၅၀) ကျော် ကို ဝယ်ယူခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ထူးခြားချက် အနေနဲ့ မတ်လ(၁၀)ရက်နေ့ (၁) ရက်တည်းကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃) သန်း (၁) ကြိမ် ၊ ကန်ဒေါ်လာ(၆) သန်းကို (၁) ကြိမ် ဝယ်ယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ဗဟိုဘဏ်က ဝယ်ယူတဲ့အခြေအနေကြောင့်လား ငွေလဲဈေး ကွက်က ပြန်ကန်တဲ့ အခြေအနေမျိုးကြောင့်လား အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေး ပြန်ကန်တက်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဗဟိုဘဏ်ဟာ ငွေကြေးဈေးကွက်ကို ထိန်းထားနိုင်တဲ့အခြေအနေတခုကို ရောက်နေတာ ကြာပြီလို့ ပြင်ပငွေကြေးဈေးကွက်အကျိုး ဆောင်တွေက ပြောဆိုနေတာ ကြာပါပြီ။ ပြင်ပငွေကြေးဈေးကွက်ဟာ ဈေးနှုန်းထုတ်ပြန်တဲ့ အခြေအနေသာသာသာရှိတော့တယ် လို့ ဆိုထားကြပါတယ်။
ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍမှာလည်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ ကုန်သွယ်မှုပမဏာဟာ တိုးတက်နေသလို ကာလတူထက် တစ်ဘီလီယံကျော် တိုးတက်နေတာပါ။ ဒီတိုးတက်မှုမှာလည်း ပို့ကုန်ထက် သွင်းကုန်ပိုများပြား နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်လာဈေးတွေ ဆက်တိုက်ကျဆင်းလာရတဲ့ အကြောင်းရင်းက လူတွေ စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့ အခြေအနေကြောင့် ဖြစ်မယ် လို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာစိုးထွန်းက ပြောပါတယ်။
အမေရိကန်ရဲ့ဘဏ်တိုးနှုန်းတွေ လျော့ချမှု၊ ပြည်တွင်းမှာ ငွေဈေးဆက်တိုက်ကျမယ်ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်ကြတဲ့ အချက်တွေအပေါ် မှီတည် ပြီး ငွေဈေးထပ်ကျသွားအုန်းမယ် လို့ ယူဆတဲ့ အတွက်ကြောင့်လို့ ပြောပါတယ်။ ဝယ်လိုသူတွေအနေနဲ့ကလည်း ထပ်ကျတာကို စောင့်ကြရင်း ရောင်းသူတွေကလည်း ဒီထက်ဈေးပိုကျတော့မယ်ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ချရောင်းရင်း အခုလိုဈေးကျဆင်းသွားတဲ့သဘော လို့ သုံးသပ်ထားပါတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ ပို့ကုန်ရငွေတွေရှိနေပေမယ့် သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေက သွင်းကုန်တင်သွင်းတာ လျော့ကျတဲ့အတွက်ဈေး ကွက်မှာ ဒေါ်လာဝယ်လိုအား လျော့ကျသွားတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြင်ပအကျိုးဆောင်ရဲ့အပြောအရ ဈေး ကွက်မှာ ငွေဈေးကိုချပြီး ရောင်းနေပေမယ့်အဝယ်မရှိတော့တဲ့သဘောမျိုးတွေတွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စီးပွားရေးတွေ မကောင်းတဲ့အတွက် သွင်းကုန်တွေလျော့ကျခဲ့ပေမယ့် ပို့ကုန်ကတော့ငွေဈေးမြင့်တက်မှုနဲ့အတူ တင်ပို့မှုအားကောင်း တဲ့ရလာဒ်အရဈေးကွက်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ပိုလျှံတဲ့အနေအထားကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ပုံမှန်ဒေါ်လာ ဝယ်ယူမှုဟာ တကြိမ်ကို ဒေါ်လာ (၃) သန်းလောက်ကို ဝယ်ယူပေးနေသည့်တိုင်း ဈေးကအကျဈေးရောက်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တချက်က တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ဂယက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနေတာကြောင့်လည်းပါမယ်လို့ ယူဆလို့ ရပါတယ်။ ပြင်ပအကျိုးဆောင်တွေအနေနဲ့ မြန်မာငွေကြေးဈေးကွက်ဟာ တရုတ်ယွမ်ငွေဈေးကို မှီခိုနေရတယ်လို့ ဆိုကြ တဲ့အတွက်ပါ။
ဒါအပြင် နိုင်ငံတကာမှာလည်း COVID-19 ဂယက်ဟာ ရိုတ်ခတ်မှု ပြင်းထန်နေပြီး သွင်းကုန်ကဏ္ဍမှာ တရုတ်ကုန်စည်ကို အားထား ရတဲ့ မြန်မာအတွက်လည်း ဖိအားရှိပါတယ်။နယ်စပ်တလျှောက် ကုန်သွယ်မှု လမ်းကြောင်းတွေကို တရုတ်က ကန့်သတ်တဲ့အတွက် မြန်မာတွေအနေနဲ့ သွင်းကုန်လိုအပ်ချက်ကို မဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာရှိလာတဲ့အတွက် ဖြစ်နိင်ပါတယ်။ မြန်မာအနေနဲ့ ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်မှုကနေ ပို့ကုန်ရငွေ အများအပြားရရှိနေတာပါ။ အထူးသဖြင့် တချိန်က နယ်စပ်ကို အဓိကထားပို့နေရ တဲ့ဆန်လို ပို့ကုန်တွေဟာ လက်ရှိကာလမှာ ရေကြောင်းကနေ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းအထိ တင်ပို့နိုင်ခဲ့တာပါ။ နယ်စပ်တွေ ရပ်တန့်ထား သည့်တိုင် ရေကြောင်းကုန်သွယ်မှု တိုးလာတာကြောင့် ငွေစီးဆင်းမှု ပိုကောင်းလာတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ ဈေးအတက်အကျတွေထက် ငွေဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်ဖို့က အရေးကြီးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအတက် အကျ ကြမ်းရင် ပို့ကုန်ကော သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှု ကြီးတဲ့အတွက် အတက်အကျကြမ်းတဲ့အစား တည်ငြိမ်တဲ့ ငွေကြေးလဲလှယ်မှုဈေးနှုန်းမှာရှိသင့်တယ်လို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေက ဆိုပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ သုံးနှစ်ဆက်တိုက် အတက်ပြခဲ့တဲ့ မြန်မာကျပ်ငွေ ဖောင်းပွမှုဟာ ၂၀၂၀ နှစ်စပိုင်းမှာတော့ ပြန်မာလာတဲ့ အနေအ ထားရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အတက်ကြမ်းခဲ့သလိုပဲ အဆင်းကလည်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းဖြစ်တာကြောင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ရိုက်ခတ်မှုအပြင် ဒုတိယဆင့်ကဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတခုလို့ပဲ ဆိုချင်ပါတယ်။
ငွေလဲလှယ်နှုန်း အတက်အကျကြမ်းတာတွေဟာ ဈေးကွက်အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စမဟုက်ဘူးလို့ ဆိုကြပြီး တည်ငြိမ်မှုမရှိရင် ကုန်သွယ်ရေးကအစ လုပ်ကိုင်ရ ခက်ခဲလာနေတဲ့အခြေအနေမှာ ရှိတာမို့လုပ်ငန်းရှင်တွေက တည်ငြိမ်စေချင်နေကြတာပါ။ COVID-19 ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကိုလည်း ကြုံတွေ့နေရချိန်မှာ ငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်းထားကိုတည်ငြိမ်စေမှသာ စီးပွားရေးအရှိန်ကို ထိန်း ထားနိုင်မယ့် အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ - ဆလိုင်းထွန်းထွန်း
ဆောင်းပါး 28 March 2020
COVID-19 Fund ချေးငွေ ဘယ်လိုလျှောက်ကြမလဲ
ဆောင်းပါး 21 March 2020
ပြည်တွင်းမှာ အ‌ခြေခံစားသောက်ကုန်တွေ လုံလောက်ရဲ့လား .....
ဆောင်းပါး7March 2020
ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ အကျိုးအမြတ်ပိုင်ဆိုင်သူတွေကို ဖော်ပြတာ ကောင်းလား
ဆောင်းပါး 29 February 2020
COVID-19 ဗိုင်းရပ်နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဂယက်
ဆောင်းပါး Business Bees 24 February 2020
ချင်းတောင်တန်းဒေသရဲ့ သဘာဝအလှတွေကို ထိန်းသိမ်းရင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးစေလိုသူ ဦးငွန်ဇမှုန်
ဆောင်းပါး 22 February 2020
ထိရောက်စွာ မသုံးနိုင်သေးတဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှု ဥပဒေ
တပ်မတော်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် အီးယူနိုင်ငံများအပါအဝင် အနောက်နိုင်ငံအချို့ကို မြန်မာ့ရေထွက်ကုန်တင်ပို့ရောင်းချရန် ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ထားမှုများ ယာယီရပ်တန့်သွားနိုင်
ပြောင်းလဲခန့်အပ်လိုက်သည့် ဝန်ကြီးအချို့အပေါ် ကုန်သည်/စက်မှုအသင်းချုပ်(UMFCCI) ဒုဥက္ကဌတစ်ဦး၏ အမြင်
တရားမဝင်ငါးဖမ်းပိုက်များကြောင့် ရေသယံဇာတရှားပါးလာပြီဟု ကမ်းနီးရေလုပ်ငန်းရှင်များပြော
မွန်ပြည်နယ်တွင် စည်သွပ်ဘူးစက်ရုံ၊အစာချက်စက်ရုံတို့အပါအဝင် ရေထွက်ကုန်အဆင့်မြှင့်တင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဖိတ်ခေါ်
ပြည်ပသကြားဝင်ရောက်မှုနည်းပါချိန် ပြည်တွင်းသကြားဝယ်လိုအားများသဖြင့် ဈေးမြင့်တက်လာ
15-E, Dagon Center 2, Pyay Road, Myaynigone-Sanchaung Township, Yangon
(+95)944 421 217 9
BETV on Facebook
Subscription our Newsletter
စီးပွားးရေး၊ စီးပွားရေးအပြောင်းအလဲနှင့် သက်ရောက်မှု သတင်းများ ကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိရှိနိုင်ရန် လူကြီးမင်း၏ အီးမေးကို အခမဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပါ။
BETV (Business & Economics Television) သည် ရွှေပြည်ခေတ္တရာမီဒီယာကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ပွဲဦးထွက် အွန်လိုင်း စီးပွားရေး သတင်းမီဒီယာ ဖြစ်သည်။
BETV ၏ ဆောင်ပုဒ်မှာ “မြန်မာပြည်စီးပွားရေးကဏ္ဍ သတင်းအချက်အလက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး အလေးပေး” ဖြစ်သည်။
2019 © Copyright BETV Business News (Business & Economics Television). All Rights Reserved. Developed by OrientWebs